Famantarana 9 manana toetra mampatanjaka adaladala ianao nefa somary saro-pady - Fanahy
Ianao dia badassa mahalala izay tadiaviny eo amin'ny fiainana ary tsy matahotra ny handeha haka izany. Mora ianao, hoy ny sasany hoe tsy matahotra, manana fihetsika eny amin'ny traikefa nahafinaritra.
Fa eo anilan'ity hery ity, misy lafiny iray hafa ho anao ianao fanahy mora tohina izay zahana tsara amin'ny hovitrovitra omen'ny olon-kafa.
Fifangaroana hafahafa ny manana, fa ianao na izany aza ny enigma, ny fifanoherana, ny fifangaroan'ny mahery sy malefaka.
Ka inona avy ireo toetra mampiavaka anao? Inona no mahatonga ny olona matanjaka sy mora tohina?
1. Mbola diso fanantenana ihany ianao indraindray.
Ny fahatsapanao dia tena mifanaraka tsara ary midika izany fa mety handentika anao indraindray ny fanentanana ny tontolo maoderina. Na izany aza, na eo aza izany dia manana ny tanjaka tsy miovaova hiadiana ianao na inona na inona tsy avelanao hisy hisakana anao satria fantatrao ny hery tokony hanaovanao ny fiainana amin'izay tianao.
ny fomba hanomezana toerana sipa
2. Mila fotoana mangina kely ianao hamerenana ny baterinao.
Na dia mivoaka sy mifanerasera aza ianao dia tsy mahazo angovo avy amin'ny hafa, fa kosa omenao ny olona laninao mandritra ny fotoana be dia be toy ny introvert mety.
Noho izany, na dia mety manantena aza ny hafa fa ho eo ianao isaky ny fety na hetsika rehetra amin'ny tetiandro sosialy, dia mila fotoana kely fotsiny ianao manokana. Ity fotoana mangina ity dia ny fomba fialan-tsasatrao sy ny famerenanao ny baterinao ary io koa no fanilihanao ny fahasosorana na ny tsy firaharahianao mety ho azonao.
3. Tsy mila ivon'ny saina ianao.
Tsy fahita matetika ny mahita ny tenanao ho ivon'ny zavatra, fa tsy izany velively ny fikasanao hiafara any. Noho ny toetranao matanjaka sy ny tanjaky ny toetranao voajanahary, ny hafa dia manintona anao ho toy ny samoina ao anaty lelafo.
Na eo aza izany, voatahiry tsara ny ego-nao ary voatazona ary mandany ny ankamaroan'ny fotoananao ianao mba hahazoana antoka fa milamina sy miala voly ny olon-drehetra. Tsy mahatsapa velively ny filàna miseho miharihary ianao ary sahirana mahatakatra ireo olona izay.
helo ao amin'ny meme sela
4. Maniry fatratra resaka lalina kokoa ianao.
Aleonao lavitra ny resaka manokana, misy dikany ary ara-panahy aza toy izay resaka kely, izay tsy ho ela dia mankaleo anao.
Azonao atao ihany koa ny mahatsapa rehefa misy olona mitazona ny tena fahatsapany na koa mandainga aminao ary manelingelina anao izaitsizy izany satria fantatrao fa tsara toerana kokoa hanampy ianao raha toa ka marina izy ireo. Izany dia mety hitarika anao handany fotoana sy hery be dia be hanandrana hamantatra izay mety ho olan'io olona io.
5. Mihaino tsara ianao.
Tianao ny miresaka, saingy fantatrao tsara ny fotoana mety hanginana sy fihainoana. Ny fahafantarana ny fanamaivanana azo avy amin'ny fisokafan'ny olona iray, dia afaka ny ho ilay olona itokisan'ny namanao sy ny olon-tianao ianao.
Mihaino tsara ianao ary miaraka amina fikarakarana lalina ary azonao atao foana ny miteny hoe rehefa misy olona maniry anao hanome torohevitra sy rehefa mila fivoahan'ny fihetseham-pony fotsiny izy ireo.
Famantarana 13 Manana toetranao matanjaka ianao izay mety hampatahotra olona sasany
Fandrika 12 amin'ny fanananao toetra matanjaka tokony hialanao
Ny bokin'ny fiainana ny vehivavy mahery
9 Toetra mampiavaka ny vehivavy alfa marina
6. Tsy matahotra miantso ny olona hivoaka ianao, fa manana fikasana tsara foana.
Mahatsapa ny lainga ianao ary tena tsy tianao ny fitondran-tena maharary na manimba olona hafa, ary noho ny tanjaky ny toetranao dia tsy mijanona eo ianao.
inona no ilaina amin'ny fiainana raha miasa fotsiny isika
Na ianao na olona tianao tsy hohajaina dia miteny ianao ary mampahafantatra fa tsy ekena izany ary tsy ho zaka ny fihetsika toy izany.
Manao izany hatrany anefa ianao, amin'ny fikasana hampiroborobo ny fandriam-pahalemana sy ny fampihavanana dia tsy miditra amin'ny fanombohana ady na handrisihana fifandonana.
7. Tsy afaka ny tsy hanohitra ny fihetsiky ny adala ianao.
Mety hiseho toy ny hoe mankafy miresaka momba ny olona ianao, saingy ny marina dia mahatsapa ny manjo ny hafa sy ireo olana lehibe atrehin'ny fiaraha-monina ianao. Miaraka amin'izany ao an-tsaina dia tsy afaka manaikitra ny lelanao fotsiny ianao rehefa mahita na maheno zavatra adala - ary be loatra ny olona eto amin'ity tontolo ity araka ny tianao.
8. Misafidy izay hampiaraka ianao.
Ny zava-dehibe indrindra tadiavinao amin'ny mety ho vady dia ny fahaiza-manao marina sy marina manomboka amin'ny fotoana hihaonanao. Mahita resaka kely tsy dia ilaina loatra ianao ary aleonao mianatra momba olona iray amin'ny alàlan'ny fivoarana voajanahary amin'ny resaka marina sy traikefa ifampizarana.
Noho ny fahatsapanao sy ny fahatsapanao raha misy olona mametraka eo alohan'io dia sarotra aminao ny mampiaraka amin'ny olona amin'ny fomba nentim-paharazana kokoa ary mety ho tafintohina amin'ny daty eo amin'ny tontolo tena izy ianao fa tsy amin'ny tranokala na fampiharana finday.
9. Indraindray ianao dia miditra amin'ny 'maody mangina' manodidina ny olona sasany.
Tsy mampaninona anao ny mizara ny herinao amin'ireo olona manan-danja amin'ny fiainanao - ny namanao sy ny fianakavianao - fa rehefa sendra olona iray izay tsy ahitanao karazana vibe dia manomboka miverina ao aminao ianao hitahiry ireo magazay angovo ireo .
Mbola eo ny herinao ary mijanona ho mailo hatrany ianao amin'ny BS na tsy fanajana, saingy mandray andraikitra misimisy kokoa ianao hianarana bebe kokoa momba azy ireo alohan'ny hanapahana hevitra raha mendrika ny herinao izy ireo.
famantarana fa very liana ny bandy iray
te hitomany aho fa afaka t
ny fomba hanombohana taratasim-pitiavana ho an'ny olon-tianao